I-Goma-Center d'accueil Caritas - I-Airbnb
I-Goma-Center d'accueil Caritas
Goma Nord -kivu, I-Democratic Republic of the Congo
Igumbi e-ihhotela ibungazwe ngu-Properties Reservation Department
· amakamelo okulala 45
· imibhede engu-37
Itholakala e-Goma, e-Goma, CENTRE D'ACCUEIL CARITAS inikeza indawo yolwandle yangasese. Nge-WiFi yamahhala, leli hhotela lezinkanyezi ezimbili linikeza ideski elingaphambili lamahora angu-24 kanye negumbi lokuphumula elabelwe. Ihhotela linendawo yokudlela, kanti i-The Border (Grande Bariere) Rwanda-Congo iqhele ngamamitha angama-500 ukusuka e-Center d'accueil Caritas.
Isidlo sasekuseni se-buffet samahhala sinikezwa njalo ekuseni endaweni Kusukela ngo-6:00 kuya ku-10:00AM.
Ihhotela linenkundla yokudlala. Ukudoba kuphakathi kwemisebenzi izivakashi ezingayijabulela Echibini i-Kivu Eduze kwayo.
I-No lie Centre d'accueil Caritas inendawo ekahle, Isendaweni eyodwa phakathi kweKota enkulu kakhulu e-Goma evikelekile kahle lapho abantu Bahamba Ngokuphepha nangokuthula .Kule ndawo mayelana nawo wonke amakamelo anombono we-Kivu Lac.
Sikhuluma ulimi lwakho!
During your stay at Centre d'accueil Caritas Goma, You will be accessing Food and Beverage any where you are Such as in Garden, on Kivu lac Terasse, Restaurant near the lac with international dishes.
Ezinye izinto okumele ziqashelwe
Isaziso: Khumbula ukunikeza Inombolo yakho Yokuxhumana Etholakala Ku-Watsapp.
Lokhu, kuyadingeka , Ngoba kuzovumela wena kanye nathi ukuthi sixhumane kalula njengoba iningi leSivakashi lingenawo Ama-Sim Cards Ocingo Lwendawo. kuzoba ngcono ukunikeza leyo Nombolo ekuqinisekiseni kwakho ukubhukha ukuze ukwazi ukuthintana ngokuqondile ngemva kokubhukha.noma sithintana nawe noma yikuphi lapho okhona.
Isidlo sasekuseni se-buffet samahhala…
Bonisa wonke amasevisi angu- 13
Indawo yethu Iphephile eduze nechibi laseKivu futhi indawo ekahle yamaBar, izindawo zokudlela, amakilabhu e-Nigth, Izitolo ezinkulu, iBorder kanye neRenki Yamatekisi.
I-Calafia Restaurant , i-Pilli Resaturant, i-Night club kanye ne-Casino ingama-500m, iNhloko yehhovisi labafuduki nabathuthela kwelinye izwe iqhele ngamamitha angu-400, kuyilapho iNdlunkulu ye-MONUSCO iku-600m ukude.
Ibungazwe ngu-Properties Reservation Department
Izinga lokuphendula: 40%
Ngena: 12:00 - 17:00
Hlola ezinye izinketho ezise- Goma Nord -kivu namaphethelo
I-Democratic Republic of the Congo